ပုရွက်ဆိတ်များထက်သာလွန်သည် - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > ပုရွက်ဆိတ်တွေထက် သာ. ကောင်း၏
သင့်ကိုသေးငယ်ပြီးအရေးမပါဟုခံစားရစေသည့်လူအုပ်ကြီးတွင်သင်ပါဝင်ဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ကလူတွေဟာ bug တွေလိုသေးငယ်တာကိုသတိထားမိလား။ တခါတရံဘုရားသခင့်အမြင်တွင်ကျိုင်းကောင်များသည်ခုန်ပေါက်နေသောကျိုင်းကောင်များနှင့်တူသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဟေရှာယ ၄၀း၂၂-၂၄ ၌ဘုရားသခင်က
မြေကြီးစက်အပေါ်မှာထိုင်။ ၊ မြေကြီးသားတို့ကိုနှံကောင်ကဲ့သို့မှတ်တော်မူထသော၊ မိုthe်းကောင်းကင်ကိုမျက်နှာကြက်ကဲ့သို့ကြက်။ ၊ နေစရာတဲကဲ့သို့ဖြန့်တော်မူထသော၊ မင်းညီမင်းသားတွေကိုသူတို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြတယ်။ မြေကြီးပေါ်ရှိတရားသူကြီးများကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့စိုက်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဟာအစေ့ကိုမြေကြီးပေါ်အမြစ်တွယ်လာတာနဲ့ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ကြတယ်။ ဆိုင်ကလုန်းသည်ဖွဲကဲ့သို့သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ ငါတို့ကိုကျိုင်းကောင်မျှသာဟုဘုရားသခင်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုပါသလောကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုစွမ်းအားကြီးမားသောသတ္တဝါအတွက်ပင်အရေးပါနိုင်ပါသလော။
ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၄၀ တွင် လူများကို ကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၏ ရယ်စရာကောင်းပုံကို ဖော်ပြသည်– “ဒါတွေကို ဘယ်သူက ဖန်ဆင်းတာလဲ။ သူတို့တပ်ကို နံပါတ်တပ်၍ ပို့ဆောင်သောသူ၊ သူ၏ကံကြမ္မာသည် အလွန်ကြီးမြတ်ပြီး တန်ခိုးကြီးလွန်းသဖြင့် မည်သူမျှ ပြတ်ပြတ်သားသားမရှိနိုင်ပေ” (ဟေရှာယ ၄၀:၂၆)။
ထိုအခန်း၌ပင်ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားကြောင်းမေးခွန်းထုတ်ထားသည်။ သူကငါတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်တယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့အမှုကိုဘယ်တော့မှငြင်းပယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူ၏ဥာဏ်တော်အနက်သည်ငါတို့၏နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏။ သူသည်အားနည်းသူ၊ ပင်ပန်းသူများကိုစိတ်ဝင်စားပြီးခွန်အားနှင့်ခွန်အားကိုပေးသည်။
အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိမြင့်သောပလ္လင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရမည်ဆိုပါကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအင်းဆက်များကဲ့သို့အမှန်တကယ်မြင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဤတွင်အမြဲရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအထူးဂရုစိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်အဓိပ္ပာယ်၏အထွေထွေမေးခွန်းနှင့်အဆက်မပြတ်အလုပ်များနေပုံရသည်။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့ဟာမတော်တဆဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်၊ ​​ငါတို့ဘ ၀ ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်လာတယ်။ "ထိုအခါကျင်းပကြကုန်အံ့!" ငါတို့မူကား၊ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလူများအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ လူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း၊ လူ ဦး ရေသန်းတစ်ရာတွင်တစ်ယောက်စီသည်အခြားတစ်ခုကဲ့သို့အရေးကြီးသည် - တစ်ခုချင်းစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၏ဖန်ဆင်းရှင်အတွက်တန်ဖိုးရှိသည်။
သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်နေပုံရသနည်း။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသူများကိုစော်ကား၊ အရှက် ခွဲ၍ ကျိန်ဆဲကြ၏။ ဘုရားသခင်သည်လူတိုင်းကိုချစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့လျော့။ လျစ်လျူရှုကြသည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သော“ အထက်လူကြီးများ” ကိုလက်အောက်ခံရန်ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေရာချထားခြင်းခံရသည်ကိုယုံကြည်ရန်လုံလောက်သည်။ လူ့ဘ ၀ သည်အဝိဇ္ဇာနှင့်မာနထောင်လွှားခြင်း၊ ဒီအဓိကပြproblemနာရဲ့တစ်ခုတည်းသောတကယ့်အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သူကိုအသိပညာနဲ့ယုံကြည်မှုပါပဲ။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာများကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောသတ္တဝါများအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာမှာမည်သူ့ကိုမျှအမှိုက်သရိုက်အဖြစ်မယူမှတ်သောယေရှုဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုနှင့်တစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်သည်သူ၏စံနမူနာကိုလိုက်လျှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံသူတိုင်းတွင်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပြီးထိုနည်းအတိုင်းပြုမူဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အတွက်အရေးကြီးပါသလော။ သူ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဆောင်သောသူများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသေခံရန်တစ် ဦး တည်းသောသားကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအကအားလုံးကိုကပြောပါတယ်။